Mbola nisy ihany koa ny filazan’ny OMS dia fa misy tranga 67 izany hoe misy 32 hafa ankoatra ilay 35, saingy efa novainy natao amin’ilay 35 ihany. Nampiahiahy tao anatin’ny tarehimarika nentina. Tamin’ny volana 6 mey dia nisy “prélèvement” na olona nakana singa hanaovana fitiliana miisa 252 natao teny amin’ny IPM, izay betsaka noho ny mahazatra isan’andro fanaon-dry zareo izay salan’isa 100 na 150 farafahabetsany satria ny be indrindra, dia 201 fa indray mandeha ihany. Tsy mbola notenenina ilay 32 satria nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana hoe aleo haverina hatao “prélèvement” sy hotiliana ireo olona ireo, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Ny zavatra nahagaga dia hatramin’ny nanaovana “prélèvement” sy fitiliana dia lasa be dia be tao anatin’ny fotoana fohy ireo olona nitondra ny tsimokaretina. Tsy maintsy nandraisana fepetra nohamarinina satria saropady ny ady amin’ny valanaretina, ary mendrika ny homena ny vaovao mitombina ny mpiray tanindrazana. Ny 21 tamin’ireo 32 no efa natao fitilianja teny amin’ny Centre d’Inféctiologie Charles Mérieux na ny CICM Ankatso, izay niarahana tamin’ny IPM nahita ilay hoe 32 no voa, ka “plateau technique commun” na fitaovana mitovy niombonana no natao niaraka tamin’ny CICM sy IPM, ary ny solontenan’ny Minisiteran’ny fahasalamana. Nitsimbadika ny isa satria 4 tamin’ireo 21 efa nolazaina fa voa no “positifs”, araka ny fanazavan’ny Pr Vololontiana. Andrasana kosa ny valin’ireo 11 ambiny. Tsy misy tarehimarika hotaterina. Notapahan’ny fanjakana ihany koa fa na ireo 35 efa nambara fa voa aza dia haverina hatao fitiliana any amin’ny CICM, ary mbola hanatrika eo ny avy amin’ny IPM. Ahoana no mety ho fahatokisana ireo fitiliana tany aloha? Misavoritaka tanteraka izany aloha ny resaka antontan’isa momba ny trangana coronavirus eto Madagasikara ary tahaka izany koa ny saim-bahoaka. Saropady loatra, ka mba hananana vaovao mitombina sy marina ary mangarahara no tanjona, hoy ny fanazavana.